uphicotho-zincwadi / usd Uvimba
Udidi: uphicotho / usd
I-AUDUSD iwela ngaphantsi kwe-0.7100 emva kweeNkcazo zeMisebenzi yase-US ePositive
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-2 kaDisemba
Kumsebenzi wamva nje, i-AUDUSD yawela ngaphantsi kwezithintelo ze-0.7100 kwaye ngoku ithengisa ipesenti ze-0.16 phantsi kwemini, ixinzelelwe yidatha efanelekileyo yase-US. I Usihlalo weFed uJerome Powell Imbono enethemba ngezoqoqosho kunye nengxelo yokuba ibhanki kufuneka iqhubele phambili nomgaqo-nkqubo oqiniswayo xa kujongwe izoyikiso zobhubhane zixhaswa yidatha ye-US yale veki.
Amanqanaba okumelana: 0.7250, 0.7200, 0.7150
Amanqanaba enkxaso: 0.7050, 0.7000, 0.6950
Emva kokuwa phantsi kwe-0.7555 ephezulu, i-AUDUSD iyancipha iyaqhubeka iqhuba ngaphantsi kwe-5 kunye ne-avareji ehambayo imihla ngemihla. Ixabiso lingaphantsi kwinqanaba le-0.7100, ukugcina iibhere zihambelana nomdlalo. Iinkunzi ezinkulu, ngakolunye uhlangothi, azinakwenzeka ukuba zibe nomdla ngaphandle kokuba zizama ukwenza i-rebound ukusuka kwi-low ngonyaka, okwangoku kwi-0.7062.
Ukurhweba ngokuqhubekayo ngaphantsi kwenkxaso ethe tye yajika ukuchasana kwi-0.7100 kunokukhokelela kwimeko embi ngakumbi, ebonisa ukuba i-bounce isekude. Abahwebi kufuneka bagcine iliso kwinqanaba eliphantsi le-0.7050. Ukubuyisela ngaphezu kwenqanaba le-0.7150, ngakolunye uhlangothi, kuya kwandisa i-rebound elandelayo ukusuka kwi-0.7062 ukuya kwi-0.7250 kwimeko yokuhamba okulungileyo.
Okwangoku, i-intraday bias ye-AUDUSD ihlala ingalunganga. Ngethuba nje inqanaba lenkxaso ye-0.7050 lihlala liqinile, ezinye iinkqubela phambili zisaqwalaselwa. Ukuba inqanaba le-0.7150 liphulwa, imimandla ephakamileyo ye-0.7350 ingaba yinjongo yokuqala.
Ukwaphulwa okuqinileyo, kwelinye icala, kunokukhaba-ukuqala umjikelo onamandla ukusuka kwinqanaba le-0.7100. Okwangoku ikhefu elisezantsi kwinqanaba lenkxaso ye-0.7150, ngakolunye uhlangothi, inokuguqula nayiphi na intshukumo ephakanyisiweyo eyenziwe kwaye yandise ithemba lokubuyisela eliqale kwinqanaba le-0.7062.
I-AUDUSD iyaqhubeka kwi-Decline kwaye ihlale ngaphantsi kwe-0.7200
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Novemba 25
I-AUDUSD - I-dollar yase-Australia ilahlekelwa yi-dollar yase-US, phantsi kweepesenti ze-0.17 ukuya kwi-0.7179 intraday ephantsi ngexesha lokubhala. Ngaphandle kweemeko ezincinci zokungabi namali, i-indices yaseYurophu iphezulu, ngenxa ye Iholide yokubulela eUnited States. Ukuhla kwengeniso ye-intraday kwidola yaseMelika kuye kwaphazamiseka kuqikelelo lwe-Fed olunobundlongondlongo, olusebenze njengomoya ovuthuza ngamandla.
Amanqanaba okumelana: 0.7300, 0.7250, 0.7200
Amanqanaba enkxaso: 0.7150, 0.7100, 0.0.6950
Umkhwa we-AUDUSD uguqule i-bearish, eqiniswa kukuba izikhombisi zobugcisa kwitshathi yemihla ngemihla ziye zaqhubela kwintsimi embi. Landela ngokuthengisa ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ze-5 kunye ne-13, malunga ne-0.7170, iya kuqinisa i-bearish bias kwaye iveze i-AUDUSD isibini kubuthathaka obongezelelweyo.
Nawuphi na umzamo wokubuya, kwelinye icala, umngcipheko wokuphuma kumndilili ohambahambayo we-5 wokuchasana nokuphazamiseka kwi-0.7220. Oku, kwakhona, kufuneka kusebenze njengesithintelo esibalulekileyo, esinokuthi, ukuba sinqotshwe ngamandla, sinokuthi siqhube isigqubuthelo esifutshane kwaye sityhale i-AUDUSD isibini sibuyele kumzobo ojikelezayo we-0.7300.
Iimpawu zokukhawuleza kwixesha leeyure ze-4, ngakolunye uhlangothi, okwangoku zikhomba ukuthengiswa okuqhubekayo kwixesha elisondeleyo. I-RSI isoloko ingaphantsi kwe-oversold level ye-40, kwaye i-4-iyure ehambayo i-avareji ye-5 kunye ne-13 iyawa kwaye ingaphezulu kwexabiso ngelixa lihlala lingalunganga.
Nangona kunjalo, ixabiso lokuvala ngaphezu kwexesha elisondeleyo le-0.7300 kwiiseshoni ezilandelelanayo lingenza umdla womthengi kwaye liqinisekise ukunyuka okuthe kratya ngokubhekiselele kwimiqobo ye-0.7555, ephakame ukususela ekupheleni kuka-Oktobha 2021. Ngokuchasene noko, inkxaso ye-0.7105, eyayi ichongiwe njengenkxaso ngo-Agasti 2021, inokuba yinto ekujoliswe kuyo elandelayo.
I-AUDUSD iphinda ibuyele emva kokubetha iiveki ezintandathu ezisezantsi kwi-Sub 0.7300
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Novemba 18
Ngethuba leseshoni yaseMelika, i-AUDUSD ibini yandisa i-rebound yayo ukusuka kwiiveki ezintandathu ezisezantsi, ukunyuka ukuya kwi-0.7293 ye-intraday ephezulu, kodwa akukho nto ilandelwayo. Ukwahlukana phakathi umgaqo-mali ukuma phakathi kwe-Reserve Bank yase-Australia (i-RBA) kunye ne-(US) i-Federal Reserve iye yaphembelela umkhwa wamva nje obonwe ukususela ekuqaleni kwale nyanga.
Amanqanaba okumelana: 0.7400, 0.7350, 0.7300
Amanqanaba enkxaso: 0.7250, 0.7150, 0.7050
Iinkunzi zenkomo zibuya kwaye zikhokela izibini ukuya kwi-avareji ehambayo ye-5 kunye ne-13, ngoku kwi-0.7285, ukuya kwi-intraday ephezulu ye-0.7293 ngoNovemba 18, kunye ne-0.7300 uphawu olusebenza njengekhefu lesikhashana. Inkxaso eqinile ephantsi inikezelwa kwakhona ngumgca wokunyuka obuyela kwi-Aug. 20 kwaye ngoku kumanqanaba e-0.7250.
Ukubuya kwi-medium-term low ye-0.7250 kubonwa njengokuguqula yonke into engalunganga yexesha elide ukusuka kwi-0.8000 ephezulu. Kwicala elingasenyakatho, ukuphulwa kwinqanaba le-0.7300 lokumelana kuya kuba ngumqondiso wokuqala wokuba i-rebound iyaqhubeka. Ngaphandle koko, nokuba kukho i-bounce, umkhwa unokuqhubeka ube yi-bearish.
I-intraday bias kwi-AUDUSD ihlala ingathathi hlangothi ngeli xesha. Ukuzuza okungakumbi kuxhaswa nje ngokuba inqanaba lenkxaso ye-0.7250 lihlala lihleli. Kwi-upside, ikhefu lezinga le-0.7300 lingaphinda liqalise i-rally ukusuka kwinqanaba le-0.7170, kunye nenqanaba le-0.7550 njengenjongo yexesha elifutshane elilandelayo.
Nangona kunjalo, ikhefu eliqinisekileyo lenqanaba le-0.7250 linokuqinisekisa ukugqithiswa kwexesha elifutshane kunye nokutshintshela kokungalunganga, okuvumela ukuhla okubukhali. Ngexesha elifutshane ukuya kwixesha eliphakathi, i-bullish tilt inokwandisa ngaphaya kwexesha elifutshane elihambayo le-5 kunye ne-13 kunye nemida ye-0.7300.
I-AUDUSD ibuyisela umva iNyanga ezininzi eziPhezulu ze-0.7546 phakathi kweMarike yoMngcipheko
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Okthobha 21
I-AUDUSD inqabile okokuqala kule veki, ilahlekelwa yipesenti ze-0.65 kunye nokurhweba kwi-0.7465 ngexesha lokubhala. Esi sibini siqhubekile sanyuka saya kwelona nqanaba liphezulu ukusukela ekuqaleni kukaJulayi, kwaye indawo eyi-0.7546 yabona ukujika kwangaphakathi. A goodish uptick kwimfuno kwi Idola yaseMelika yaphembelela ukubuyisela umva, okwancediswa yimpembelelo yomngcipheko kunye nezivuno eziphezulu ze-US Treasury bond.
Amanqanaba okumelana: 0.7645, 0.7600, 0.7550
Kwitshathi yemihla ngemihla, izalathisi zobuchwephesha zibonakalisa iimeko eziguqukayo njengoko i-RSI ijikela emazantsi. Okwangoku, ukubuyiswa kwe-medium-term low ye-0.7169 kubonwa njengokuguqula yonke i-downtrend yexesha elide ukusuka phezulu kwe-0.8007.
Akukho bungqina bokuba igqityiwe. Iinkunzi kufuneka zikwazi ukuphinda zithathe amanqanaba e-0.7500 kunye nentshukumo ezinzileyo ngaphezulu kwazo. Ukurhweba okuzinzileyo ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ze-5 (ngoku kwinqanaba le-0.7458) kunokunyusa amathuba okuba kugqitywe kwaye kugxininise umva kwinqanaba eliphantsi le-0.7169.
I-AUDUSD ngoku iye yawa phantsi njenge-0.7458, kwaye i-intraday bias ishintshile ekungathathi hlangothi. Ukuhla kwamva nje kuthathwa njengolungiso olupheleleyo lokukhula ukusuka kumanqanaba e-0.7169 ukuya kwi-0.7546. Ngenxa yoko, i-AUDUSD inokuvavanya amanqanaba asezantsi enkxaso ethe tyaba, ngoku ephantsi kwe-0.7450.
Noko ke, kwimeko yokuphindaphindeka, utyekelo lusenokuqhubeka lunika ithemba. Ukunyuka kwakutshanje kwedola, ngokubanzi, kuxhasa isibini "tsalela Umva" imeko. Ngaphandle kokuguqulwa, umngcipheko kwitshathi yeeyure ze-4 uhlala ulinganiswe phezulu kwixesha elifutshane. Ikhefu phezu kwe-0.7500, inqanaba elisondeleyo lokumelana, kufuneka libonise enye intshukumo esenyakatho.
IDrifts Drifts, iAussie eyomeleleyo ngaphandle kwePropathi yeTyala lase China
Emva kokubini i-Aussie kunye ne-Kiwi kwi-pairings yedola zitsibile nge-0.80 yeepesenti ngolwesiHlanu njengezikhombisi zomngcipheko, ukunyuka kwamaxabiso ezinto, ukuphela kwexhala le-Evergrande, kunye nezicwangciso zokuphinda zivulwe zikazise i-AUD / USD 0.35 yepesenti ephezulu ukuya kwi-0.7285 namhlanje.
Ekupheleni kweveki ephelileyo, iimarike zemali eNew York zirhuqele kwisiphelo, ngokutsiba kwiirhafu zaseMelika kususa Ilahleko zedola yaseMelika kwangoko kunye nokuthumela ii-majors kufutshane kufutshane. Ekurhwebeni ngaphandle kwe-Asia, isalathiso sedola sonyuke nge-0.21 yeepesenti ukuya kwi-92.28, ngaphambi kokuba yehle kancinci ukuya kwi-92.24. Isalathiso sithengisa ngoku kuluhlu lwe-92.00 ukuya kwi-92.50.
Ngenxa yoko, zombini i-Antipodeans zichanekile kuxinzelelo lokuthengisa ngakumbi ukuba iindaba ezivela e-China ziyaqhubeka ukonakala. Ngenxa yoko, bobabini banokuthi bathengise-kwiindibano kwiintsuku ezimbalwa zokuqala zale veki, ngakumbi ukuba idatha ye-PMI yase China ngoLwesine imbi kakhulu.
Ngenxa yokuxhalaba kwihlabathi liphela kushishino lwepropathi yase China kunye nesigqibo se-US Federal Reserve sokunyusa inzala kwakhona, idola lase-Australia lenze kakuhle ukugcina umhlaba kwiveki ephelileyo. Kwiveki ezayo, i-A $ iya kuqhubeka ukugxila e-China, ngelixa ishedyuli yedatha yase-Australia iya kubandakanya ukuthengisa kunye nokuthengisa izindlu.
I-Aussie iphinda ibuye ibuye, iRisk-On Mood iyenza buthathaka i-USD
Ngenxa yokuba i-Aussie ihlala isetyenziswa njenge-proxy yeenkxalabo malunga noqoqosho lwase-China, i-AUD / USD yehle yaya ku-0.7220, elona nqanaba lisezantsi ukusukela nge-24 ka-Agasti. Naxa iindaba zisithi u-Evergrande uphulukene nentlawulo yenzala yebhondi, i-0.7200 yahlala iqinile. Kwakukho ingxelo encinci esemthethweni evela kumagosa amaTshayina, kodwa kwacaca ngokukhawuleza ukuba, ngelixa abatyali mali - ngakumbi abatyali zimali bamanye amazwe- bazakuphulukana nemali, uqoqosho lwase China kunye neimarike zehlabathi azizukubeka esichengeni. Imarike yemasheya iye yafunyanwa.
Ngedatha evela kwiimarike zexesha elizayo laseMelika ezibonisa izithuba ezikhulu zomnatha ukusukela nge-21 kaSeptemba, malunga nexesha lokuxhalaba malunga ne-China yokuthengisa izindlu nomhlaba yayikwincopho yayo, abatyali mali banokuba sele benamaxabiso ngeendaba ezininzi ezimbi kwiAussie.
Ujoliso emva koko lwatshintshela kwi-FOMC, umzimba wokwenza umgaqo-nkqubo we-Federal Reserve. "Ukwehla kwezinga lokuthengwa kweeasethi kungafuneka kungekudala," Ikomiti ichaze, ithatha inkqubela phambili kwiinjongo zayo zokufumana ingqesho kunye nokuzinza kwamaxabiso kuyaqhubeka. Le nto ibintle kakhulu into ebesiyilindele- akukho xesha libekiweyo lokuthengwa kweebhondi, kodwa “Kungekudala.”
tags Aussie, IDOLI
Ukuthengisa i-AUDUSD kuqokelela ukulandelwa emva kwedatha ye-AUD engalunganga
Ukuhlaziywa: 16 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Agasti 16
Isibini se-AUDUSD siqhubeke nokwehla ngokuthe ngcembe ngexesha leseshoni yaseYurophu, sihlaziya imihla ngemihla malunga ne-0.7308. Idatha yasekhaya iveze ukuba inani labantu abaqeshiweyo lehlile ngaphezulu kunokuba bekulindelwe ngo-Agasti, benobunzima kwidola yase-Australia. Urhuluneli uLowe uphume wayokuphikisana namaxabiso emarike ngenqanaba eliphezulu lemali ngasekupheleni kuka-2022 no-2023, ebonisa ukuba RBA wayengekho kwimeko yokomeleza i-AUD.
Amanqanaba enkxaso: 0.7289, 0.7150, 0.7050
Ekuqaleni kweseshoni yaseYurophu, i-AUDUSD yangena kwinqanaba lenkxaso le-0.7300. Ukophuka ngumqondiso wokuthengisa, ujolise kwi-sub-0.7300 kwaye mhlawumbi ukuya kuthi ga kwinkxaso eqinileyo kwi-0.7220 yokuthatha inzuzo yexesha elifutshane. Ngawo onke amathuba, ireyithi yokutshintshiselana ye-AUDUSD iya kuqhubeka nokuwa kwiseshoni elandelayo yorhwebo.
Inqanaba le-0.7200 linokuba yinto ekujoliswe kuyo kwiibhere. Ngelixa ukubuyela umva kwinqanaba le-0.8000 kusenzeka, akukho datha yaneleyo yokuqinisekisa ukubuyela umva okuhle ngeli xesha. Oko kukuthi, inokumela ukubuyela umva kwendlela yokudityaniswa kwexesha elide. Kwicala lokudibanisa, ukubuya okunyusayo ngaphezulu kwamanqaku ayi-0.7478 kuya kubuyisa ukuzithemba komthengi.
Izikhombisi ezomeleleyo kwixesha leyure ezi-4, kwelinye icala, okwangoku zikhomba kwintengiso eqhubekayo kwikota ekufuphi. I-RSI ibuyela kwinqanaba layo elingaphezulu kwe-30, ngelixa i-4-iyure ehambayo ye-5 kunye ne-13 iyehla kwaye inyuka ngaphezulu kwexabiso ngelixa ihlala kwindawo engalunganga.
Nangona kunjalo, ukuba intengiso ivale ngaphezulu kokunganyangeki okuncinci kwi-0.7350 kwiiseshoni ezilandelayo, inokubeka inzala yokuthenga kwaye iqinisekise ukonyuka okuthe ngcembe ukuya kwimiqobo ye-0.7600, eyi-Juni 2021 ephezulu. Ukuba kukho ukuphindaphinda okunamandla, izithintelo ezingama-0.8000, ezichongwe njengokuchasana ngoFebruwari 2021, kunokuba yinto ekujoliswe kuyo elandelayo.
I-AUDUSD inyuka ngokudlulileyo phakathi kwe-0.7300 Zone njenge-Bearish Impetus Fades
Ukuhlaziywa: 9 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Agasti 9
I-AUDUSD inyuka ngeepips ezingama-30, okanye iipesenti ezingama-0.30, ngokuchasene ne Idola yaseMelika ngoLwesine. Ukuba zonke ezinye izinto zihlala zihleli, inqanaba lotshintshiselwano lingaqhubeka nokunyuka kwiseshoni elandelayo yorhwebo. Inqanaba le-0.7400 linokuba yinjongo enokubakho kubarhwebi abathembekileyo.
Amanqanaba okumelana: 0.7645, 0.7557, 0.7450
Amanqanaba enkxaso: 0.7350, 0.7289, 0.7189
Ukugcina ipateni ekhulayo, iinkunzi zeenkomo ze-AUDUSD zifuna ukwaphula okungapheliyo ngaphezulu kwezithintelo ezingama-0.7400, njengoko kubonisiwe kwiitshathi zemihla ngemihla. Ukukhula kunokuphazanyiswa yimimandla eyi-0.7450. Okwangoku, ukubuyela umva ngezantsi kwe-avareji ehambayo ye-13 ejikeleze i-0.7350 kunokuthi kunciphise ithemba lokuzithemba okwethutyana, kuthumele abathengisi be-AUDUSD ngaphantsi kwe-veki ephantsi ye-0.7345.
Ngomqondo obanzi, ukurhweba okuqhubekayo ngaphezulu kokuxhathisa ngokuthe tyaba kwi-0.7389 kubonisa ubungakanani bexesha eliphakathi lokukhuthaza. Ukugqibela ukubonisa ukuphela kwexesha eliphantsi eliphakathi ukusuka kwi-0.8000, i-AUDUSD inokufuna ukubuyisela umva kwakhona ukusuka kwi-0.8000 ukuya kwi-0.7105 isezantsi kwi-0.7478. Endaweni yoko, ikhefu kwinqanaba le-0.7478 liya kugcina imeko yexesha elide yokunyusa.
Ukuqhubekeka kokuphakama kwi-AUDUSD kubonisiwe ngumvuzo osuka kwinqanaba le-0.7350 lenkxaso. I-intraday bias inyuka kwakhona. Ukunyuka ukusuka ku-0.7105 ukuya ku-0.7476 ukusuka ku-0.7350 ukuya ku-0.7500 ngokulandelayo kufanele kujolise kuqikelelo lwe-0.7105 ukuya ku-0.7476 ukusuka ku-0.7350 ukuya ku-0.7550. Ikhefu lenkxaso ye-0.7350, kwelinye icala, liyimfuneko yokuqinisekisa umphezulu wexesha elifutshane.
Umkhwa unokuhlala unyanzelekile nokuba kukho ukubuyela umva. Ubuthathaka be dollar xa iyonke iyabaxhasa abo babini "Ukunyusa" imbonakalo. Ngaphandle kokufundwa phakathi kwe-RSI midline, umngcipheko kwitshathi yeeyure ezi-4 ihlala ithambekele phezulu kwixesha elifutshane. Ikhefu elingaphezulu kwe-0.7426, inqanaba lokumelana elikufutshane, kufuneka libonakalise ukuqhubela phambili emantla.
Iindibano ze-AUDUSD ziye kwelona nqanaba liphezulu kwiiveki ezintathu ezidlulileyo 0.7400
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Septemba 2
Ngosuku lwesithathu ngokulandelelana, idola yaseOstreliya yenyuka yaya phezulu kwiiveki ezininzi. Ixabiso lokutshintshiselana nge-AUDUSD liyaqhubeka nokunyuka, lifikelela kwi-0.7409, elona nqanaba liphezulu ukusukela nge-5 ka-Agasti. Isalathiso sedola, okanye I-DXY, iphantsi kweepesenti ezingama-0.25, urhwebo ngama-92.25, elona zinga lisezantsi ngenyanga.
Ukuqhubela phambili ngaphezulu kwenkxaso ebalulekileyo ethe tyaba yokuqhekeka kuguqukile, kujikeleze imimandla eyi-0.7340 edlulileyo kwi-avareji yokuhamba kwemihla ngemihla ye-5, eyayithathwa njengeyona nto iphambili kubarhwebi be-bullish, ngokomfanekiso wobugcisa. Ngenxa yoko, isibini se-AUDUSD sikwazile ukwakha kubuyiso lwaso lwakutsha nje oluqinileyo ukusuka kwinqanaba le-0.7100.
Nangona kunjalo, izikhombisi zobuchwephesha kwiitshathi zemihla ngemihla sele zibonisa ukuba imakethi iya ngakwindawo ethengisiweyo. Ngenxa yoko, nakuphi na ukuzuza okungaphezulu kwesithintelo esimalunga ne-0.7400 kusenokwenzeka ukuba kujongwane nenkcaso enzima kwaye kuthintelwe kufutshane nendawo yenkxaso ye-0.7426. Umda ophezulu wendawo yokudibanisa uphawulwe ngummandla okhankanywe.
Kwelinye icala, ii-oscillators kwitshathi yeeyure ezi-4 bafikelele kummandla othengiweyo ngaphezulu kwaye baqhubeke nokuqokelela ukubambeka okuhle, okuthetha ukuba ukunyuka okuthe kratya kunokwenzeka. Ukunyuka ixesha elide kuluhlu lwe-0.7426 kuya kuqinisekisa umbono kwaye kubangele umjikelo omtsha wokuthenga okufutshane, kuzisa isibini se-AUDUSD kufutshane nenqanaba elibalulekileyo le-0.7500.
Kwelinye icala, nakuphi na ukubuyela umva okwangoku kubonakala ngathi kufumana inkxaso eqinileyo kufutshane ne-0.7350 ejikeleze iyure ye-4 ye-MA 13. Ke kukho inqanaba elijikelezayo le-0.7300, elithi, ukuba liphulwe ngamandla, lisenokufaka isikali endaweni yabathengisi be-bearish. Ukwehla kokulungiswa kwesibini se-AUDUSD ukuya kwimimandla ethe tyaba ye-0.7289 kunokukhawulezisa ukuba iinkunzi zeenkomo zisilele ukubamba.